Ngwongwo ulo na mmekorita nke ndi mmadu | Martech Zone
Satọde, Febụwarị 20, 2010 Sunday, October 4, 2015 Adam Obere
Doug kwuru na nso nso a ka o sie ike njikọta na akpaaka ga - abụ isi maka ndị na - ere ahịa email. Anyị na ndị ọrụ ụlọ na-arụ ọrụ na nke ahụ bụ ihe ha na-achọ. Ihe ole na ole ị kwesịrị ịma banyere ezigbo ala:
Ndị ọrụ ụlọ na ụlọ abụghị ndị ọkaibe ma ha enweghị ngalaba IT ka ha kpọọ mgbe ha chọrọ enyemaka. Ha bụ ndị ọchụnta ego, na-anabata teknụzụ ngwa ngwa, wee tụọ mmetụta ọ bụla. Ha na - abụkarị ndị ahịa ọkaibe - n'ihi na ego ha dabere na ya.
Ndị ọrụ ụlọ na ụlọ rụọ ọrụ na oke. Efu ọ bụla emere na onye na-ere ahịa ma ọ bụ teknụzụ ọhụụ bụ ego site na uru ha bara na ụlọ a rere. N'ihi ya, ha na-akpachapụ anya banyere ngwaọrụ ha nakweere, otu ha si dị mfe iji, yana mmetụta ha na-ere n'ahịa ahụ.
N'ihi nke a, ha emeela ka anyị nwee ike ịzụlite elekere. Anyị ugbu a na-akpaghị aka inupụ a "Ndepụta nke ụbọchị" ka anyị na ala na ụlọ ahịa si Facebook mgbidi na Twitter Iyi. Nke a bụ otu n'ime ndepụta nke ha ma jikọtara ya na a njegharị njem na anyị na-akwado ndị ahịa anyị. Mgbe anyị mepụtara atụmatụ ahụ, anyị ejighị n'aka etu ndị enyi ga-esi nwee ike ịhụ ka a na-edepụta ala na ụlọ na mgbidi ha.
Gbanwee, na-anabata nnabata! Ọtụtụ ndị ọrụ anyị na-aza ajụjụ kwa ụbọchị. Ha esiteghị n’otu ndị mmadụ ma mgbe ụfọdụ abụghị ụdị okwu onye zụrụ ahịa nwere ike ịnụ (dị ka “ọ dị mkpa ka ehichaa ya”) mana maka ịnọ onye na-ere ụlọ na ọnụnọ nke uche dị ezigbo mkpa yana inwe mkparịta ụka na-aga n'ihu banyere ndepụta ha na-eme ka ha nọrọ n’elu.
Anyị Ọrụ ire ụlọ ugbu a jikọtara ya na Twitter, Youtube (anyị na-ewepụta vidiyo site na foto edepụtara), yana ọrụ nnweta ndepụta ụlọ. Nsonaazụ a dị oke mma - ndị ahịa anyị ahụgoro gbasara 25% mmụba na ọnụọgụ nke elele peeji nke na njegharị njegharị, ederede inbound na ajụjụ ọnụ na-akwụghị ụgwọ. Nzaghachi a juru m anya ma gosipụta nke ọma etu ijikọ mgbasa ozi mmekọrịta gị na mbọ ahịa gị (ọbụlagodi azụmaahịa na ngwa agha) nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu na akara gị.
Nke a bụ otu n'ime akpaghị aka Youtube vidiyo ụlọ:
Ihe kachasị mma na nke a bụ na onye ahịa nwere ike ịme ya niile - WordPress, Mobile, Twitter, Facebook, Youtube - ha niile nwere otu pịa nke òké. Ha ekwesighi ịbanye na ngwa ọ bụla n'adabereghị na oge ọ bụla - ha nwere ike ịme ka njikọta akaụntụ ahụ otu oge wee bipụta na-akpaghị aka. Anyị achịkọtara vidiyo nke gosipụtara arụmọrụ.
Tags: Ama ụlọ dijitalụahịa ịre ụlọonye nwe uloire ala na ụlọnjegharị ụlọ nke ụlọelekọta mmadụ mediamgbasa ozi ụlọ ahịa na-elekọta mmadụnjegharị njem